Madaxweynaha Argentina oo farriin u diray Lionel Messi, kuna wargeliyey inuu ku biiro Kooxda… – Gool FM
(Barcelona) 31 Agoosto 2020. Madaxweynaha Argentina ee Alberto Fernandez ayaa farriin u diray Lionel Messi, waxaana uu ugu yeeray inuu dib ugu soo laabto dalkiisa hooyo oo uu xirfaddiisa ciyaareed ku soo gabagabeeyo Kooxda Newell Old Boys.
Lionel Messi ayaan mustaqbalkiisu ahayn mid fadhiya, isagoo cinwaannada Wargeysyada ciyaaraha haystay todobaadyadii ugu dambeeyey, kaddib markii uu kooxdiisa Barcelona si layaab leh uga codsaday inuu doonayo inuu ka tago.
Bixitaan kasta oo ah garoonka Camp Nou, Weeraryahanka reer Argentine ayaan loo ogolaan doonin inuu ka tago kooxda Barca haddii aan la bixin lacagta lagu burburin karo heshiiskiisa oo dhan 700 milyan oo euro oo u dhiganta 624 milyan oo gini ama 823 milyan oo dollar.
Kooxaha la la xiriirinayo Messi waxaa horboodaysa Manchester City, inkastoo Paris Saint-Germain, Inter Milan iyo Juventus sidoo kale ay xiisaynayaan saxiixa xiddigan.
Taageerayaasha kooxda Newell Old Boys ayaa dhowaan soo maray waddooyinka Magaalada Rosario, iyagoo taageeraya in Messi uu ku soo laabto kooxdii uu matalayay markii uu yaraa, haddana Madaxweynaha Argentina ayaa sidoo kale ka dhawaajiyay inuu doonayo inuu arko Leo uu kooxdan u ciyaaraya ha dhowaato ama ha dheeraatee.
“Waxaad ku jirtaa qalbigeenna, waligeey ma arkin adigoo ka ciyaaraya Waddankeenna,” Madaxweyne Fernandez ayaa sidaas ku yiri farriin uu u diray Messi oo uu u soo mariyey warsidaha la yiraahdo C5N.
“Nasii farxadda adigoo xirfaddaad ciyaareed ku soo gabagabaynaya Newell Old Boys, waa kooxdaada.” ayuu ku daray hadalkiisa Madaxweynaha Argentine.
RASMI: Ciro Immobile oo qandaraaska u kordhiyey Kooxdiisa Lazio... (Meeqa sano ayuu u saxiixay?)